राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिएस्सी नर्सिङ्ग पढाउने तयारी - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिएस्सी नर्सिङ्ग पढाउने तयारी
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिएस्सी नर्सिङ्ग पढाउने तयारी
हेल्थ आवाज बिहीबार, २०७६ असोज ९ गते, १४:३० मा प्रकाशित
काठमाडौ–राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यसै शैक्षिक सत्रबाट बिएस्सी नर्सिङ्ग अध्यापन सुरु गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि पहिलो शैक्षिक कार्यक्रम बिएस्सी नर्सिङ्ग बाट सुरु गर्ने तयारी गरेको हो । दाङ्गमा रहेको सो प्रतिष्ठानले नर्सिङ्ग अध्ययापनका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम तयार गर्न बिहीवार राजधानीमा विभिन्न विश्वविद्यालयका विज्ञलाइ बोलाएर पाठयक्रम विकास कार्यशाला आयोजना गरेको छ । पाठयक्रम तयारी गरी त्यसलाइ प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक परिषदबाट पास गराउनुपर्छ ।
परिषदबाट पाठ्यक्रम पास भएर नर्सिङ्ग अध्यापन अनुमतीका लागि नर्सिङ्ग काउन्सिलले स्वीकृत दिएपछि प्रतिष्ठानलाई बिएस्सी नर्सिङ्ग पढाउने बाटो खुल्छ । आगामी बैशाखसम्ममा यी सबै प्रकृया सकेर अध्यापन सुरु हुने प्रतिष्ठानकी उपकुलपती प्रा.डा. संगिता भण्डारीले जानाकारी दिइन् ।
नर्सिङ्ग परिषदकी अध्यक्ष प्रध्यापक गोमा निरौलाले सरकारी प्रतिष्ठानले नर्सिङ्ग अध्यापन गराउनु सहनीय भएको भन्दै गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने सुझाव दिइन् । उनले पाठयक्रम, फ्याकल्टी र प्रयोगात्मक अध्ययन गरि तीन पक्षलाई उत्कृष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर केदार वरालले अहिले बजारमा नर्सको संख्या धेरै भएको तर उत्पादन भएका थोरै नर्समात्र गुणस्तरीय भएको बताए ।
नर्सिङ्ग अध्ययन भनेको पढाइ मात्र नभएर सेवासँग पनि जोडीएको हुँदा अध्यापन गराउने भन्दा पनि पहिले दिइने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नर्सिङ्ग परिषदकी रजिष्टार विन्दा घिमिरेले नेपाली समाज र विश्व दुवैलाई हेरेर पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना माहाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबीच बढेको दुरीलाइ कम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कणाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पुर्व रजिष्टार श्याम लम्शालले जती नै दुर्गममा पढेता पनि सरकारी प्रतिष्ठानबाट उत्पादित जनशक्ती अब्बल हुने दावी गरे ।
सरकारले दुई वर्षअघि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिठान संचालन गर्न ऐन बनाइ तत्कालीन राप्ती अन्चल अस्पताललाइ प्रतिष्ठानमा परिणत गरेको थियो । प्रतिस्ठान स्थापना भएपछि पहिलो पटक शैक्षिक कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ।